एपीवानलाई पत्रकारको प्रतिप्रश्न : नेपाल आइडलकाबारेमा प्रश्न उठाउन पाइदैन ? - Himalayan Kangaroo
एपीवानलाई पत्रकारको प्रतिप्रश्न : नेपाल आइडलकाबारेमा प्रश्न उठाउन पाइदैन ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ भाद्र २०७४, बिहीबार ०६:२७ |
आमा भएर बोकी हेर सन्तानका पीडाहरु….
साच्चै तारादेवीको स्वरमा गुन्जिरहने यो कालजयी गीतको भाव र मर्म जस्तै स्तव्ध अवस्थामा छ यतिबेला नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज रियालिटी शो नेपाल आइडल। नेपाल आइडलका निर्देशक, तीन जना जज न्ह्यु बज्राचार्य, इन्दिरा जोशी र कालिप्रसाद बाँस्कोटा तथा एपिवान टेलिभिजनलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबारसम्म भोट नगन्न हाललाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेश आएको केही समयमा नै नेपाल आइडलको अफिसियल फेसबुक पेजबाट नौ वटा प्रश्न गरिएको छ। नौ प्रश्नको प्रकृति र ह्यासट्यागमा सामाजिक संजालमा छेडिएको आयोजक पक्षको धुँवाधार विरोधपछि कार्यक्रमका दर्शकमा पनि अनेकन प्रश्नहरु उव्जेका छन्।
सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशपछि आइडलको विरोध गर्नेहरु र नेपाली मिडियालाई परनिर्भरतामा लैजान खोज्नेहरुलाई खुसी लागेको होला भनेर किन विरोधी किटान नगरी अदालतलाई अप्रत्यक्ष गाली गरियोरु यो १ नम्बर प्रश्न अँध्यारोमा ढुंगा हानेर अदालतलाई थर्काउन खोज्ने जालसाजी हो नि आयोजकको।
नेपाल आइडलका ४ होनाहार संगीतसाधकको भविष्य के हुने भनेर प्रश्न जुन रुपमा सोधियो यो आफैंमा पूर्वाग्रही प्रश्न हो। किनभने अदालतले मात्रै परेको मुद्दाको छिनोफानो गर्न छलफल गर्न डाकी शुक्रवारसम्म चुप बस है भनेको हो। अदालतलाई र त्यहाँका श्रीमानहरुलाई नै होनाहार संगीतसाधकको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने परोक्ष आरोप आयोजकले किन कुन हैसियत र कुन नियतले उठाए ? जनता जान्न चाहन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज शो को नियमानुसार नै यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न आफैमा सही हो। जरुर पाउने। तर त्यो प्रक्रिया यो देशको कानुुनको परिधिमा टेकेर पनि गरिनु पर्दछ नि, पर्दैन ररु नेपालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी, एनओसी र अखिल नेपाल फूटबल संघ, एन्फामा आइओसी र फिफाको नियम अनुसार नै खेल हुन्छन् तर ती नियमहरु नेपालका कानुनमा बाझिएका हदसम्म स्वतः रद्द हुन्छन्।
एनओसी र एन्फाका बितेका दशकका विवादका उदाहरण काफी प्रसंग हुन् नेपाल आइडलका हकमा पनि होइनन् र ? संसारमा नै युएन बाहेक अरु जो कसैले बनाएका कानून मान्न कुनै पनि देश बाध्य हुँदैन। उसो भए एक साँगीतिक शो को कार्यक्रमको फर्मेट भन्दैमा आफूखुसी गर्न पाइन्छ त ?
तर के हिजो कसैले कुनै कारणवश देश लुटेको थियो भनेर आज नेपाल आइडलले पनि लुटन पाउनु पर्छ भन्ने हो त ? यो तर्क होइन, प्रश्न त झन होइन, बरु अरुले चोरे, मैले नि चोरेँ मैले के बिराएँ भन्ने कायरता मात्रै हो आयोजकको, होइन र ?
अन्तर्राष्ट्रिय शोको फरमेट अनुसार नै एपी वानले एसएमएस भोटिंगका लागि आह्वान गर्‍यो भन्ने कुरा गलत होइन। तर त्यो आयातित फरमेट नै गलत थियो भने त्यसमाथि प्रश्न गर्ने छुट सचेत नागरिक, वकिल, पत्रकार वा नागरिक समाजलाई हुन्न र ? विरोध गर्नेहरु कथंकदाचित गलत भएछन् अदालतबाट भने पनि आयोजकको आयोजना झन निख्खर हुन्छ। त्यसमा प्रश्न उठाइँदैमा किन बर्बराहट व्यक्त गरिहाल्नु पर्ला र ?
कुरा नेपाल आइडलको मात्रै रहेन, होइन उसकै मात्रै रह्यो। किनभने उसले मात्रै यो शोको नाममा जातीय विभाजनका कुरा सामाजिक संजालमा हावासरी फैलायो। भलै ती विवादहरु चाहे रामकृष्ण ढकालजस्ता सिद्धहस्त गायकका मुखारविन्दबाट आउन् वा अरु कुनै महान आत्माबा । तर नरोपिनुपर्ने विषवृक्ष यो शोबाट मल पानी गरियो उल्टै। त्यसैले विभाजित सामाजिक तप्काबाटै अदालतको ढोका पनि चहारियो। चेक एण्ड व्यालेन्सका लागि लोकतन्त्रमा अभ्यस्त मुलुकमा यस्ता मस्का र फण्डा अस्वभाविक हुन्न नि, हुन्छन र ?
होइन। जरुर होइन। निश्चित विधि, विधान र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाबाट यस्ता शोहरु नेपालमा गरिराख्न पाइन्छ, पाइएको हो, भोलि पनि पाउनुपर्छ। एक झमट प्रश्न र बहस उठदैमा आयोजकले तीन पाथी छेरेर पुच्छर लुकाउन पनि पर्दैन।
निवेदक यज्ञमणि न्यौपानेले कति भोट गरेका छन् भन्ने त पंत्तिकारलाई ख्याल भएन। त्यो पहुँच र रुचि पनि भएन। तर यज्ञमणिलाई सोधिएको प्रश्न आम नेपालीमाथिको अपमान हो। पंक्तिकारले चिनेका यज्ञमणि यो देशका एक विद्धान वकिल हुनुपर्छ। उनको हुलिया थाहा भएन। तर उनको स्ट्याटस नेपाल आइडलका आयोजकको भन्दा निम्सरो र निकम्मा नहुनुपर्छ। उनी नेपाल आइडलका दर्शक, यो देशका वकिल र सचेत नागरिकका रुपमा भोट गरेर पनि वा शून्य भोट गरेर पनि कानुनमा टेकेर प्रश्न उठाउन स्वतन्त्र छन् नि, छैनन् र रु कि यज्ञमणि जस्ता सार्वभौमहरुको मुखमा बुझो लगाउने नै नेपाल आइडलको आदर्श मान्यता हो र ?
कुन आधारले यज्ञमणि न्यौपानेले एपी वानले आफूले चाहेको प्रतियोगीलाई बचाउन चाहेको भन्ने जघन्य आरोप लगाए भन्ने त उनले आयोजकले जस्तो आफ्नै मिडियामा प्रचार गर्न नसक्लान्। किनकि उनी एक नागरिक मात्र हुन बिचरा। एपी वान जस्तो सर्वव्यापी मिडिया हाउस होइनन्। वकिलले आफुना बहस र तर्क अदालतमा दिन्छन् न कि प्रेस विज्ञप्तिमा। तसर्थ उनको अधिवक्ता पदवीसम्म उनको नामसँग जोडन नचाहेर आयाजकले पनि आफ्नो वौद्धिक , पेशागत मर्यादा पालनको हदैसम्मको दरिद्रता त देखाएकै छन्।
साथमा भोलि सत्य तथ्य बाहिर आउँदैमा, उनले मुद्दा हार्दैमा पनि उनले यही समाजमा शिर ठाडो पारेर नै मुख हँसिलो देखाउने छन्। देखाउन पाउनु पर्छ। किनभने उनलाई उनको पेशाले दिएको संवैधानिक स्वतन्त्रता हो नि त्यो, होइन र ?
सद्धाम हुसेनलाई फाँसी दिदा पनि उनका वकिल थिए साथैमा। संसारमा सबै अपराधीलाई त कानुनी सहायता हुन्छ भने पेशैले वकिलले किन मुख देखाउन, एपी वानको इजाजत लिनु पर्छ र ?
एपीवानका संचार मिडियाले पनि गलत र भ्रामक समाचार कति दिए होलान् जान अन्जानमा। तिनका सम्पादक, मालिक यही समाजमा हुइकिएका छैनन् र ?
बरु यसरी वकिल, वकालत र कर्म र पेशाप्रति मिडियाको व्यानरमा कुतर्कपूर्ण आक्रोशको हर्कत पो आयोजकले बन्द गर्ने र यस गंभिर प्रश्नमा नेपाल बार एशोसिएनले पो मुख खोल्नु पर्ने पो हो कि ?
नेपाली भाषाको आफ्नै एचडी च्यानल र अन्तराष्ट्रिय शो ल्याउनु एपीको गल्ती थियो थिएन भन्ने बहस हरकोणबाट होस्। पंत्तिकारलाई लाग्दैन यो नै गल्ती थियो। नेपाल सरकारको अनुमतिमा खुलेको टिभीले ल्याएको कार्यक्रम बन्द गराउने हैसियत कुनै माइकालालको किन होला र कानुन सिवाय। तर नयाँ कार्यक्रम ल्याए भन्दैमा, प्रविधि नयाँ भित्रयाएको भन्दैमा कहाँ नेपालको कानुन दैव जानु भन्न पाइएला र ? नपाइएला नि ?
कतै यो नियोजित नौटंकी त होइन टिभीको टिआरपी बढाउने ? हो भने चिज बाहिर आउला त सुमन भाइ ?
(पत्रकार खड्काको माइसंसार डट कममा प्रकाशित यो लेख साभार गरेका हौं ।)
Previousचलचित्र ‘ऐश्वर्य’को पोष्टरमा दीपिकालाई हाइलाइट
Nextअष्ट्रेलियामा बच्चाको यी नाम राख्न नपाइने
न्यायधिस नियुक्तिको विवाद ः नीतिगत कि दलगत ?
२८ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १७:२९
भारतको प्रतिष्ठित जी सिने अवार्ड यस वर्ष नेपालमा हुने, नेपालीहरुको लागि समेत विधा थपिने
७ श्रावण २०७५, सोमबार ०३:३०
के नेपाली नारीको मूल्य गाईको जति पनि छैन ?
११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०४:३२
‘ठूला’ देशमा बस्ने हामी भने सधैं ‘साना’ !
२१ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार ०९:४३